Dulmarka Xarunta / Qalabka | Ota Citizen's Plaza
Qolka tababarka, teniska otomaatiga, teniska miiska>
Si fudud ayaad u dhididi kartaa si aad u baabi'iso jimicsi la'aanta oo aad u qaabeyso qaab.
Kubbadda teniska iyo miiska, qolka jimicsiga laba ayaa loo qaybin doonaa maalin go'an oo ah usbuuca, waxaana la rakibayaa mashiinka tayniska baabuurta iyo miiska miiska si aad ugu tababbarto tennis iyo miiska.
Qiyaastii 105.9 mitir murabac
Tennis otomaatiga ah: 1 qof mashiinkiiba (laguma beddeli karo jidka)
Kubbadda miiska Table ・ ・ Ilaa 1 qof cutubkiiba
Qalab la iska leeyahay
Jimicsiga jimicsiga / adkeysiga wadnaha
Mashiinka socodka: Labode LXS
Baaskiil Baaskiil: Baaskiil Cordless V67Ri
Tababar laabtaada oo dhan: FUNASIS Chest Press
Tabobar hore ee laabta: FUNASIS ayaa duulaya
Tababar garbahaaga: FUNASIS lat-jiido
Tababar labada gacmood (inta badan jirka sare): FUNASIS multi-pulley
Tababar dhabarkaaga: FUNASIS dib u dheereynta
Tababar calooshaada: FUNASIS Crunch
Tababar garbahaaga: FUNASIS Rotary Toso & Twist
Tabobar jirkaaga hoose: FUNASIS Lugta Saxaafadda & Kicinta Dibiga
Tababar dhinaca hore ee lugta: Kordhinta lugta ee FUNASIS
Tababar dhabarka lugahaaga: Kursiga lugta ee fadhiista FUNASIS
Tababar gudaha iyo dibedda bowdyahaaga: Kordhinta & Afduubka FUNASIS
Garab iyo gadaal: Dayactirka Jirka II Garabka
Jirka kore: Dayactirka Jirka II Xiriir hoose
Kharashka isticmaalka xarunta iyo khidmadda isticmaalka qalabka shilka ah ◆ Fadlan iska dhaaf sarrifka.
Hal mar (waqti looma xadido) 330
1 daqiiqo markasta 330
1 jeer baabuur saacaddiiba 330
Laga bilaabo 9:00 ilaa 22:00 maalin kasta.
* Codsiga isticmaalka waa ilaa 21:00
* Isticmaalka mashiinku waa ilaa 21:45
Tennis otomaatig ah (3 qaybood)
Isniinta / Arbacada (Qeybta 1-6)
Jimcaha (Qeybta 1-22)
Kubadda miiska (5 cutub)
Isniinta / Arbacada (Qeybta 1-3)
Jimcaha (Qeybta 1-11)
Waqtiga teniska otomaatiga ah
Waqtiga teniska miiska
Fadlan tikit ka soo iibso mashiinka tikidhada lagu iibiyo maalinta la isticmaalo oo si toos ah u codso.
Waxaan bilaabi doonnaa aqbalida ciyaarta tennis-ka iyo tennis-ka miiska 30 daqiiqo ka hor qeyb walba (1 daqiiqo ka hor kaliya qeybta koowaad), waxaana aqbalidoonaa qeybta xigta isla marka ay buuxsato.
Qolalka tababarka ayaa la heli karaa wakhti kasta.
Qolalka oo la beddelo (qalabka qubeyska, kabadhada, kabaha kabaha) ayaa sidoo kale la heli karaa.Fadlan u isticmaal waqti badan.
Markaad isticmaaleyso qolka tababarka ama miiska teniska, fadlan soo qaado kabaha isboortiga ee gudaha.
Markaad isticmaaleyso tennis otomaatig ah, fadlan soo qaado baakid tennis ah iyo kabo tennis ah (oo loogu talagalay gudaha)
Waxaa jira heshiis weyn "qolka tababarka, auto tennis, tayniska miiska tigidhada guud".
Shaqaaluhu waxay sharxi doonaan sida loo isticmaalo qalabka.
Ardayda dugsiga hoose iyo kuwa ka yarba ma isticmaali karaan, laakiin tennis auto iyo tennis miiska waxaa loo isticmaali karaa oo keliya fasalada 5aad iyo 6aad ee dugsiga hoose haddii uu weheliyo ilaaliye.
Tigidhada baarkinka lama soo saari karo.